अन्य विश्लेषण | मझेरी डट कम
gangato0 — Mon, 05/18/2020 - 09:49
कोरोना नामक राक्षसको कारण
मानव सभ्याताको बिनास हुनेछ
भवन रुपी जंगल हुनेछ
त्यो जंगल फाडेर
मान्छेहरू रुख ठड्याउने छन्
मनिसमा बुद्धि त हुनेछ
तर होस नभएको कारण
Biju Subedi — Fri, 02/02/2018 - 21:17
बुद्धिचाल, शतरञ्ज अर्थात चेस । यो खेललाई हाम्रो देश नेपालमा बुद्धिचाल, भारतमा शतरञ्ज तथा अन्य प्रायः देशहरुमा चेस नै भनिने भएकोले यस लेखमा चेस भनेर नै यो विश्लेषणात्मक लेख प्रस्तुत गरेको छु । अरु सबै खेलभन्दा चेस बौद्धिक खेल हो । दिनमा एक पटक चेस खेल्नु भएमा आफ्नो दिमाग कहिल्यै बुढो हुँदैन , सम्पुर्ण जीवनकालमा सोह्र वर्षे व्यक्तिले जस्तै दिमाग राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो पौराणिक कथाहरुमा पनि चेस रावणले आविष्कार गरेको भन्ने उल्लेख पाइन्छ । विश्वमा पहिलो प्रकाशित पुस्तक ट्रोजन हर्षको सिरिज हो भने दोस्रो चेसकै हो । चेस अहिलेको जमानामा कम्प्युटर, अनलाइन, गेम आदिमार्फत पनि खेल्न सकिन्छ । वि
PrakashmanShilpakar — Tue, 03/07/2017 - 17:24
PrakashmanShilpakar — Wed, 12/07/2016 - 13:17
Trichandra — Mon, 12/09/2013 - 15:28
युवामन्च २०७० मंसीर
नोवेल पुरस्कार विश्वकै सबभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो । यो पुरस्कार पाउनु कुनै व्यक्तिको लागि ठूलो सम्मानको कुरा हुन्छ । तर्सथ नोबेल पुरस्कार भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान तानिन्छ । प्रत्येक वर्षो अक्टोबरमा घोषणा हुने गरेको नोबेल पुरस्कारको स्थापना अल्फ्रेड नोबेल वसियत अनुरुप गरिएको हो । नोबेल बारुद र अन्य शक्तिशाली विस्फोटनहरूका आविष्कारकका साथै ठूलो औद्योगिक साम्राज्यको स्वामी हुनुहुन्थ्यो । रसायनशास्त्रमा रुची राख्ने अल्फ्रेडले नाईट्रोग्लीसरिन नामको विस्फोटक पदार्थको उत्पादन गर्नुभयो । करिव २० राष्ट्रहरूमा एक सयको हाराहारीमा विस्फोटक पदार्थ बनाउने उद्योग खोलेर अपार सम्पत्ति कमाउनु भयो । उहाँका ती आविष्कारले मानवकहितभन्दा विनाश बढी गर्‍यो ।
Trichandra — Sun, 06/30/2013 - 15:13
Trichandra — Wed, 05/29/2013 - 16:06
birendrakanu — Wed, 01/23/2013 - 16:13
Trichandra — Fri, 12/07/2012 - 23:33
केशव बोहोरा — Wed, 08/15/2012 - 12:11
भारतको जयनगरबाट जनकपुर आउने तयारीमा रहेको जेडईएन ५ -५३५) नम्बरको रेलको डिजेल इन्जिन चालकबिना नै २९ किलोमिटर गुडेर सोमबार जनकपुर आइपुग्यो । धेरै पत्रपत्रिकहरूले यसलाई मुख्य समाचार बनाए . श्रब्य र दृश्य संचार माध्यमहरु यो समाचारले भरिए । धन्न केही दुर्घटना भएन छ ! प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले आफूले चालक कवारीमाथि अविलम्ब कारबाही गर्न निमित्त महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई निर्देशन दिएको बताए छन् ।.
gorkhesailo — Tue, 08/31/2010 - 10:56
tirtha — Mon, 02/22/2010 - 10:56
बाचा कसम तोड्दा रहेछन झुटो माया गर्नेहरूले,
kbs — Sat, 11/08/2008 - 11:03